8 layer TG180 HDI PCB China Manufacturer
Description:Birao jamba sy fandevenana,Vola haingana HDI PCB,HDI Prototype PCB
Home > Products > HDI PCB > 8 layer TG180 HDI PCB
Ny sosona DHI PCB ny lavaka min 0 0.1mm fotsiny ary ny tena mampatahotra indrindra amin'ny fotoam-pamokarana be dia be. Ho an'ny sosona HDI PCB, ny fotoana fitarihana haingana indrindra dia ny 10 andro. Izahay manokana mampiavaka ny fampandrosoana ny fanamboarana terminal hendry ary hita ao amin'ny fampiharana ny rafitra fiasa Android izay mamolavola. ary mamolavola PCBA miorina amin'ny rock chip sy Amlogic solution; ampiharo amin'ny rafitra Openwrt, hamolavola, mivarotra ary miasa ny Internet sy ny tanàna marani-tsaina vita izay mifototra amin'ny chipset WI-FI tsy misy maotera avo lenta. Ny orinasa dia manome ny fampandrosoana ny tetikasa, PCBA ary ny famokarana sy varotra ny vokatra vita amin'ny mpanjifa eran-tany rehetra.
5.Mini hole: 0.1mm
6.Mini sakany / habaka: 0.15mm / 0.15mm
7.Hapotehina: Volon'ny fametahana
8.holes: lavaka laser,
Ny fahaizanay manamboatra:
Fametahana fahaiza-manao fanamboarana: 1-32 takelaka
Fitaovana: CEM1, CEM3, Teflon, Rogers, FR-4, TG FR-4 avo, base aluminium, halogen maimaim-poana
Haben'ny board: 510 * 1200mm
Fitaovana: manaraka ny RoHS Directive
PCB matevina: 1.6mm-6.4mm
Ny hatevin'ny varahina matevina: 1-6oz
Ny hatevina varahina anatiny: 1OZ-12OZ
Ny hatevin'ny Max: 6.0mm
Habe ambany indrindra: 0.150mm
Sakany / habaka keliny ambany indrindra: 3 / 3mil
Jentaly Min S / M: 0.1mm (4mil)
Ny hatevin'ny takelaka sy ny mari-pahaizana aperture: 12: 1
Varahina farafahakeliny kely indrindra: 20μm
Ny fandeferana amin'ny halavan'ny haavo (PTH): ± 0.075mm (3mil)
Ny fandeferana amin'ny halavan'ny haavo (NPTH): ± 0.05mm (2mil)
Diso toerana: Hoditra: 0,05mm (2mil)
Ny fandeferana ivelany: ± 0.05mm (2mil)
Famarana vita: HASL leadfree, milentika ao amin'ny ENIG, chem tin, flash volamena, OSP, rantsana volamena, peelable, volafotsy milentika, ENEPIG
Topy mpividy: maitso / manga / mena / mainty, volomparasy, fotsy, mavo, mangarahara
Tantara: fotsy / mainty / mavo
Rindran-damina: lalana sy isa isa / V-cut
Antony ambony indrindra 10 maninona no tokony hividianana PCB sy PCBA amin'ny rivodoza
1.TOP kalitao - Tsy maintsy izy no kofehy manan-danja voalohany.Ny nametraka ny kalitao ho toy ny indostrian'ny orinasa voalohany.In PCB, manana fitaovana maherin'ny 99% ao an-trano isika. Famonosana, fametahana, fisisihana, AOI (Auto-optical inspection), fitsapana, sns .Izany no mahatonga antsika hiantoka ny kalitao.
2.Shipping ara-potoana na dia mbola maraina aza.
Ny laharam-pahamehanay hitarika ho an'ny sosona 1-2 dia 5 andro fiasana, Multi-layer 6-8 miasa andro.Inona ny fenitra? jereo ny antsipiriany. Ary ny serivisy Express Express dia manolotra 1-2 andro ho an'ny zana-baravarana roa, 3 andro ho an'ny birao multilayer.
Na inona na inona ilainao FR4 mahazatra, TG ambony, board aluminium, board RF miaraka amin'i Er, PTFE (Teflon), tabilao varahina mavesatra, birao teknolojia miaraka amin'ny vias.impedence control boards.we afaka manolotra vokatra toy izany haingana satria manana fitaovana maro samy hafa isika amin'ny stock.
4.Teknika Fanohanana.Free DFM,
fandinihana fileovana maimaim-poana. Mpanjifa marobe (indrindra ho an'ny mpamorona sasany) no tsy tsara amin'ny fizotran'ny famokarana, na dia tsy afaka mamorona rakitra gerber marina aza izy ireo amin'ny haino aman-jery EDA.Misy traikefa be ao amin'ny indostrian'ny PCB, ireto misy torohevitra vitsivitsy ho anao.7 * 24 fanohanana an-tserasera ankoatra ny Shinoa Taona vaovao.
5. Serivisy fanokafana. inona ilay badroto? jereo eto. Te hanapaka ny vidin'ny prototypes ianao, izany no vidin'ny stormproto.Raha ity serivisy ity dia afaka mamonjy vidiny 50% farafahakeliny ianao.
6. Vidiny azo itokisana.
TSY lafo ny vidinay fa ny lafo indrindra no lafo.Ny matoky anay, dia afaka atolotra anao ny vokatra sy serivisy tsara indrindra izahay.
7.Toko valiny, fandefasana haingana.
Ny fametrahana fanontanina tsirairay dia azo valiana ao anatin'ny 2 ora.2-3 andro miala aminay mankany amin'ny varavaranao.see entana.
Tsy mila fangatahana kely indrindra izahay, na birao tokana ho an'ny fananganana PCB ary mivory.
9.O serivisy ajanony.
Tsy namokatra PCB fotsiny izahay, fa koa PCBA sy amboara tariby .Amin'ny PCB tsy mibebaka dia tsy izay tianao, mety mila stencil mikapoka ianao, singa hampidinana sy tariby hampifandraisana. Ankehitriny, afaka manary ny rehetra aminay ianao ary miandry ny vokatra farany ho eo amin'ny latabatrao.
10.Mampandehona amin'ny singa an-trano .
Manana singa maro entana ao an-trano isika, izany no hamonjy fotoana sy ny vidiny amin'ny totalinao ny tetik'asa.O indrindra amin'ny mpanohitra, capacitor, relays, ICs.
jamba sy nandevina viétra endrika Contact Now
Birao HDI PCB avo lenta Contact Now
jamba sy nalevina vita amin'ny vias Contact Now
jamba sy nalevina pcb pcb Contact Now
10Ny fanodinana HDb pcI layer Contact Now
inona no jamba sy nalevina vias Contact Now
HDI pcb amin'ny famolavolana endrika Contact Now
vidin'ny jamba sy ny fandevenana vias Contact Now
Birao jamba sy fandevenana Vola haingana HDI PCB HDI Prototype PCB Birao momba ny finday Birao tsindry fanerena Birao fanaraha-maso ny fanorana Birao fanaraha-maso ny fanatsarana Birao famaranana ENEPIG